Home » Drama, Essays.. » တောရွာဓလေ့မို့ပျော်မွေ့တယ်တော်ရေ့
Posted by ဗုံဗုံ on Mar 17, 2015 in Drama, Essays.. | 41 comments
ဟိုနေ့ကအမေနဲ့ဖုန်းပြောရင်း အလှူကြောင်းပြောရင်း ပို့စ်ရေးဖို့သတိရသွားတယ်… တကျောင်း တဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်းဆိုသလိုပေါ့နော…….. ဒီလိုဗျမိဗုံတို့ရွာမှာ အလှူတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင် လူပျိုခေါင်း အပျိုခေါင်း(ရွာမှတော့ဒီလိုခေါ်တာဘဲ ) က ကိုယ့်အပျို လူပျိုတွေ ကိုအရင်ဆုံးနှိုးဆော်ရတယ်..အလှူရှင်က ရက်ရွေးပြီးပြီဆိုရင် သူတို့ကိုအရင်ပြောရတယ်.. စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ရအောင်လို့..အပျိုအုပ်စု လူပျိုအုပ်စုက ကျရာတာဝန်ကိုခေါင်းဆောင်ခွဲပေးတဲ့ အတိုင်းယူရပါတယ်…အလှူကြီးဆိုရင်အလုပ်တွေပိုပါတယ်…အရမ်းရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ…အဓိကကျွေးမွေး ရေးနဲ့ နေရာခင်းကျင်းရေး ဖျာခင်းတာကအစ လက်သုတ်ပ၀ါအဆုံး အကုန်လုံးလူငယ်တွေလုပ်ရတာ.. ရပ်မိရပ်ဖဆိုတဲ့လူကြီးတွေက ထိုင်ရှည်တွေရယ်…ဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး.. ကျွေးတာကတော့ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းကြော်၊ မှန်ရောင်ဟင်းချို၊ပဲပြုတ်၊ငရုတ်သီးကြော်၊ ပဲတီချဉ်သုပ် အဲ အချိုပွဲက သီးမွှေးငှက်ပျောသီးရယ် ဆေးလိပ်ရယ် လက်ဖက်ရယ်ပေါ့.. ပဲတီချဉ်အတွက် ဖျာတွေပေါ်မှာ သဲတွေခင်း ပဲတီပင်ဖောက်ရတယ်…ပြီးတော့မှ အချဉ်သိပ်.အဲ့ဒါတွေက ကြိုလုပ်ထား .. ပုဇွန်ခြောက်ကြော်အတွက် ကြက်သွန်နီအခွံခွာဖို့ ညနေပိုင်းမှာ အပျိုလေးတွေက ဓားတစ်ချောင်းဆီနဲ့ လူပျိုလေးတွေက ပုဆိန်ကိုယ်ဆီနဲ့ သူတို့ကထင်းခွဲဖို့… အပျိုခေါင်း လူပျိုခေါင်းတွေက လည်တယ်.. လှတပတ လေးတွေကို ကြက်သွန်ခွာခိုင်းတယ်… ချောတောမောတာ လူပျိုလေးတွေကို ထင်းပေါက် ခိုင်းတယ်….မနီးမဝေးမှာပေါ့…ဒီဘက်ကလည်းမျက်ရည်လေးစမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့ခွာတယ်…ဟိုဘက်ကလည်း အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ ဗလတွေပြပြပြီး ပေါက်လိုက်ကြတာ… ပုဇွန်ခြောက်တွေကို မောင်းနဲ့ထောင်းတဲ့သူကထောင်း..ရေထမ်းတဲ့သူကထမ်း..ရေထမ်းတယ်ဆိုတာ.. ဘုံဘိုင်ရေကိုမသုံးဘူး တွင်းရေကိုသုံးတာ..အဲ့ဒါကြောင့်ထမ်းရတာ.. အလှူဆိုတာမျိုးက တစ်ခုလည်း မဟုတ်တော့ အားလုံးက သူ့ဟာသူစနစ်ကျ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ကြတယ်…. ကျွေးမွေးရေးအတွက် လုံးပမ်းပြီးတော့မှ အပျိုလေးတွေခမျာ သူတို့ဝတ်ဖို့ လိမ်းဖို့လုပ်ရတော့တယ်…. အလှူ့အမ ကိုရံပေးဖို့ အပျို ၂ ယောက်က ဆင်တူဝတ်ရတယ်… ကျန်တဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင်..ပန်းအိုးကိုင်.. ပရိတ်အိုးရွက်..စသဖြင့် အဲ့ဒါတွေကတော့ ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ဝတ်ပေါ့…အဲ့မှာဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ဆိုတာ ထူးခြားတယ်ဗျ.အဲ့ဒီဖက်ဖူးအုပ်ကအလှူတိုင်းကိုင်ရတာမဟုတ်သလို အပျိုတိုင်းလည်းမကိုင်ရဘူးဗျ..
အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ဆွမ်းအုပ်လိုပုံစံမျိုးထဲမှာ ငှက်ပျောရွက်အ၀ါနဲ့အစိမ်းကိုတကန့်စီကန်တော့ချွန် လေးတွေပုံစံထိုးတာတာ..တော်တော်လှတယ်…မနက်ဖြန်လိုအလှူလှည့်မှာဆိုမှ ဒီနေ့လိုမျိုးထိုးရတာရယ်… လူတိုင်းလည်းမထိုးတတ်ဘူး…ပြီးရင်တခြားကွမ်းတောင်..ပန်းအိုးတွေအလယ်မှာတင့်တင့်တယ်တယ် ကြီးတင်ထားတယ်… အဲ့ဒီဖက်ဖူုးအုပ်ကို ကိုင်မယ့်အပျိုက ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလည်း ပြေပြစ်ရမယ်…မိဘမျိုးရိုးကလည်း ကောင်းရမယ်..စီးပွားရေးလည်းသင့်တင့်ရမယ်..ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ လည်းကောင်းရမယ်..အနေအထိုင်က ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိဖြစ်ရမယ်…အမလေး….ဘာဖြစ်ရမယ်..ညာဖြစ်ရမယ်တွေများချက်ကတော့ ပြောလို့ကုန်မယ်မထင်ဘူးအရပ်ကတို့…. အဲ့လိုဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ဖြစ်ရင် ဈေးကလည်းကြီးသဗျား..သူ့ကြိုက်တဲ့သတို့သားတော့ကုန်ပြီသာမှတ်.. လယ်၁၅ ဧကနဲ့ နွား ၃ရှည်းတို့ သိန်းတရာနဲ့ဆီစက်တစ်လုံးတို့ဖြစ်ကုန်တာ.. ဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ရတဲ့သတို့သမီးသည် အစစအရာရာပြည့်စုံပါကြောင်းရွမိရွဖ အဲ ရပ်မိရပ်ဖနဲ့ ရွာလူကြီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့က အလှူမှာ ပွဲထုတ်ရင်းထောက်ခံလိုက်တဲ့သဘော…အဲ့လိုချွေးမမျိုးကိုလည်းယောက်ခမတွေက အတော်သဘောကျတယ်ဗျိုး.. ဘယ်သူ့သားလေးကတော့ ဟိုဘက်ရွာကဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်လေးနဲ့ ရတယ်တဲ့တော့်….စသဖြင့်ဂုဏ်ယူကြတာ….. အဲ့နေ့ကလည်းမိဗုံအဘိုးက ရပ်မိရပ်ဖထဲပါလေတော့ ဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ရွေးလာခဲ့တယ်နဲ့တူပါရဲ့ ..အိမ်အောက်မှာရေနွေးကြမ်းသောက်နေတဲ့သူ့ကို လှေကါးပေါ်ကနေလှမ်းမေးလိုက်တယ်……
“အလှူနေ့သိလိမ့်မယ်ပ” တဲ့ ကြည့်လေ..မခန့်လိုက်ပုံများနှယ်…….
“ နေပါအုံးအဘိုးရဲ့..ကျုပ်ကျတော့ဘာပြုလို့ဖက်ဖူးအုပ်မကိုင်ရသလဲ…ကျုပ်မလည်းရှိပါ့ ဟောဟိုမယ် လှည်းတွေ.နွားတွေ… “
“ အံမာဗျာ.. နင့်လိုကဆုန်စိုင်းပြီး တစ်ရွာလုံးမီးနဲ့တက်ရှို့နေတဲ့သူက .. ကိုင်ရလိမ့်မယ် ဖက်ဖူးအုပ်ကြီး.. မတန်မရာ..အောင်နက်နဲ့အော်ဒီကလုံး “
“ ဂိန် “
အဲ့ဒါဆွမ်းဟင်းတွေ..၀ါတွင်းကျလောင်းရမယ့်ဟင်းတွေ..ငရဲကြီးမှာမို့ပြောနေတာဆိုပြီး ၀က်ခြံကိုခြေထောက်နဲ့လှမ်းကန်လိုက်တယ်.. နာလိုက်တာပြောမနေနဲ့..
“ ဒီပုံစံနဲ့များ ဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ချင်ရတယ်လို့တဲ့”
(သွား ခီညားတို့လည်းနောက်တစ်ပိုင်းမှ ဆက်ဖတ်ဂျ)
မိဗုံတို့များ အမြင်​မ​တော်​ ဂါဇီ​လော်​နဲ့အီးယားဖုန်းလုပ်​ချင်​​သေး
အဲ့ကစ မှားတာ ပြာချက်​
အရင်ကတော့ ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင်ဆိုတာပဲ ကြားဖူးတာ။
ခုမှ ဖက်ဖူးအုပ်ကိုင်ဆိုတာ ကြားဖူးတယ်။
အဖိုးကလည်း မြေးကို ဖက်ဖူးအုပ် အကိုင်မခိုင်းဘူး။
မြေးကလည်း အကိုင်မခိုင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကို မျိုးရိုးမကောင်းလို့များလားဆိုတော့…..
အောင်ကျော်နဲ့ပုဆိန်တံဆိပ်က တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နေအုံးမယ်။
ရွာ​တွေမှာလုပ်​တဲ့အလှူပွဲက ဟင်း​တွေအရမ်းကြိုက်​ပဲ…. ဗုံတလုံးမင်​ဂါ​ဆောင်​ရင်​ဖိတ်​ပါ…
ခိခိ… အဖိုးခိုင်းနှိုင်းပုံ​လေးကလည်းမိုက်​ပါ့… :loll:
သေချာတယ် ဒါ ဖက်စိမ်းကွမ်းတောင်ကိုပြောတာ
နောက်တစ်ပိုင်း ရှိသေးတဲ့ သဘောလား ဟမ် ????
ပုန်ဏားဖြူ ပုန်နားညို လုပ်လို့ရသယ်..
နာ့ တူမ လိုအလှလေးးရွှေဘို တကြော ရှာကြည့်စမ်းးပါ့အေ..!!
အန်ကယ် ခင်ဇော် လာနေမှပဲ ငါ့တူမ ကို
ကွမ်းးရွက် တစ်တောင်းးလုံးး နေ့တိုင်းးရွက်ခိုင်းးမယ်…
ဦးးလေးး ကို ကွမ်းးရာရောင်းးခိုင်းးမယ်…
ရီပလိုင်းက ​တောက်​တလွဲ ခွိခွိ
အလှူဟင်းစားချင်​လို့ တစ်​ပိဿာ ​လောက်​၀ယ်​ပြီး လူကြုံနဲ့ ပို့​ပေးမား
ရွာအလှူပွဲက ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား….။ ကလေးဘ၀က တစ်ခါကြုံဖူးတယ်….။ ရေခပ်သူခပ်၊ ထင်းပေါက်သူပေါက်၊ ကြက်သွန်ခွာသူခွာ…ပျော်စရာပ….။
မန္တလေးမယ် ထုံအအ တောသူဋ္ဌေးတွေပြည့်လို့
သရက်ခြံပိုင်ရှင်နဲ့ အခြေအနေဘယ်လိုဒုံး တူမရေး..
တူမလေးကို သရက်ခြံပို့ပီး လယ်တွေနွားဒွေအကုန်သိမ်းပစ်မယ်… နာကွ ဒေါ်လေးလောင်း
ဒမာ ဂျားဝီး တညားအူး​လေးကိုလိုချင်​ရင်​
လှည်း နွားတင်​မကဘူး ​ခွေး​တွေ ​ကြောင်​​တွေ
လယ်တွေ၊ နွားတွေရမယ်ဆိုလို့ကတော့ ဖက်ဖူးတင်မက ငှက်ပြောတပင်လုံးကိုင်ပလိုက်မာ..
သဗုံမ ခါးပုံစ နယုန်လ ဂဠုန်ထ ..
ကျောက်စ်အဖေတို့ အရပ်မှာတော့ အလှုရှိရင် ဖိတ်စရာမလိုဘူး…
၂-ရက်လောက်အလိုမှာ တွံတေးသိန်းတန်သီချင်း အပင်မြင့်မြင့်ပေါ်ကနေ လော်နဲ့ဖွင့်ထားလိုက် ၊ ရွာနီးချုပ်စပ်က ကူညီမည့်သူတွေ ရွာအချိုးကျ ရောက်လာတယ်ဗျ ။ သူတို့ရိက္ခာဆန်နဲ့ သူတို့လာတာမို့ ရွာခံက ဘုန်းကြီးကျောင်းဝိုင်းဘေးမှာ နေရာချထားပေးရုံတင် ။ အလှုမှာ ချက်မည့်ဆန်ကို စပါးလုံးရွေး ၊ ဝက်ပေါ်စရာရှိတာကိုပေါ် ၊ အရိုးအရင်းတွေကို ညနေစာ ပဲနဲ့ချက် … တပျော်တပါး အားရစရာကြီး ။
အလှုဟင်းက ကျောက်ဖရုံသီးနဲ့ ဝက်သား (အတုံးကြီးကြီး တစ်ယောက်တစ်တုံး) ၊ သရက်ချဉ်သုပ် ၊ ငပိကြော် ကို ပုံကျွေးတာ ။ အလှုနေ့မှာ မနက်အာရုံတက်ကတည်းက မျက်နှာစိမ်းရော မျက်နှာကျက်ရော ရွာနီးချုပ်စပ်က လှေတွေ လှည်းတွေ စက်ဘီးတွေနဲ့ ရောက်လာကြတာ မနည်းမနော ။ အချိန်ဘယ်လောက်လဲတော့ မမှတ်မိ … ရွာထဲက ဝက်ကြီး ၃-ကောင် အီတွန့်ဘွမ်သွားတယ် … အဟိ အဟိ
ကုသိုလ်​တပဲ ငရဲတပိသာ အဲ့ အဲ့
“ အံမာဗျာ.. နင့်လိုကဆုန်စိုင်းပြီး တစ်ရွာလုံးမီးနဲ့တက်ရှို့နေတဲ့သူက .. ကိုင်ရလိမ့်မယ် ဖက်ဖူးအုပ်ကြီး.. မတန်မရာ..အောင်နက်နဲ့အော်ဒီကလုံး “ တဲ့…
.အောင်နက်နဲ့အော်ဒီကလုံး ..တဲ့ ။။။။
ခွိ… အဲ့ဂလောက် ထိမိ တဲ့ တင်စားချက်လေး..ပြောတတ်တာကို သဘောကျချက်…
သ​ဘောကျရင်​ နင်​ ငါ့အဘိုး
.ယူမယ် … ခေါင်(ဂေါင်) ထိ အကုန် စားမှာနော်…
ဒါနဲ့ နိ အဖိုးက…ဖွေးဖွေးနဲ့တူရဲ့လား…
နီ့ လို ဒေါ်ဖွားမေ ပုံစံပဲလား..
နာက သန်တုန်း မှန်တုန်းပါဟ
နာ မန်းလေး လာတုန်းက နီ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မကျိလိုက်ဖူးထင်တယ်။
လေတခြမ်းဖြတ်ပြီး ပါးတခြမ်းရွဲ့ ခြေတဖက် ဆာ နေတာက သဂျားဟဲ့
တောသူဌေး ကွန်မြူနစ်ခေတ်က သိမ်းထားတဲ့ လယ်သူဌေး ရွာသူဗုံကြီး
အစုံတီးလို့ရအောင် မင်ဂါဆောင်လိုက်ဘာလား..။ ။
ဟိ… မျိုးရိုးမကောင်းလို့လား ဆိုတဲ့နေရာအရောက် ရယ်ရတာ အသံတောင်ထွက်တယ်..
ဖက်ဖူးအုပ်ဆိုတာကို အမျိုးသမီးများနေ့ပွဲ တီဗီမှာပြတော့ မြင်ဖူးတယ်… စကားအတင်းစပ် သများလည်း ကွမ်းတောင်ကိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်သိလား.. ၂ ခါတောင်.. လက်ကိုင်ပုဝါလေးနဲ့ လာဖိတ်တာ.. ဟိဟိ… ဘလိုင်းကြီးကြွားခြင်း..
-အရေးအသား ကောင်းချက်..မျက်စိထဲမှာ မြင်လာတယ်..